शरीरमा भिटामीन डी को कमी भयो ? देखिन्छन् यस्ता लक्षण ! - GyanBigyan
तपाईं–हामीले दैनिक स्वस्थ्य खानेकुरा खाएर, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्दा, पर्याप्त मात्रामा निद्रा पुगे पनि भिटामिन डीको कमी छ भने धेरै खालका समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमी भए–नभएको रगतको परीक्षणमार्फत थाहा हुन्छ । त्योभन्दा अरू केही तरिका पनि छन् जसले रगतको परीक्षण नै नगरी पनि शरीरमा भिटामिन डीको कमी रहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । हेर्नुहोस् शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुदा देखिने यी पाचँ संकेत:
१. दुखाइ: शरीरमा रहेको हड्डीमा कहिलेकाहीँ दुखाइ हुनु असामान्य होइन । विभिन्न कारणले हड्डी दुख्न सक्छ । यो सबै उमेरका मानिसमा हुन सक्छ तर, अरू कारणले हुने यस्ता दुखाइ चाँडै हटेर जाने गर्छ । लामो समयसम्म रहने हड्डीको दुखाइ भने शरीरमा भिटामिन डीको कमीका कारणले भएको हुन सक्दछ । यदि यस्तो समस्या देखिएमा शरीरमा भिटामिन डीको अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
२.पसिना धेरै आउनु: गर्मीको समयमा हामी सबैलाई पसिना आउँछ । कुनै काम गर्दै गर्दा, खेल खेल्दा वा जिममा शारीरिक व्यायाम गर्दा पसिना आउनु सामान्य हो । यस्तो समय आउने पसिनामा चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर, यदि यत्तिकै बस्दा पनि वा सामान्य अवस्थामा पनि पसिना आउँछ भने त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमीका कारण पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ । यदि त्यस्तो समस्या भयो भने डाक्टरको सम्पर्कमा जान आवश्यक छ ।
३. डि-प्रेसन: यदि शरीरमा भिटामिन डीको धेरै कमी भएको छ भने मुडलाई समेत असर गर्न सक्छ । यस्तै, भिटामिन डीको कमीकै कारण डिप्रेसन हुन पनि सक्छ । यदि समयमै यसको उपचार नगरिए यसले अरू ठूलो समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसैले शरीरमा भिटामिन डीको अवस्थाबारे नियमित परीक्षण गरिरहनुपर्छ ।
४.अनपेक्षित कमजोरी: शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएको छ भने पनि अनपेक्षित रूपमा कमजोरी महसुस हुने गर्छ । शरीरको मसल्स फिट राख्न शरीरमा भिटामिन डी पर्याप्त हुन आवश्यक छ । यसले सामान्य चेटपटकबाट समेत बचाउँछ । अध्ययनहरूले यो देखाएको छ कि थप भिटामिन डी लिँदा भिटामिन डीकै कमीका कारण कमजोर भएको मसल्स ६ महिनामै फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कनेछ ।
५.कमजोर हड्डी: टामिन डीले मानव शरीरमा रहेको हड्डीलाई बलियो र स्वस्थ्य बनाइराख्ने काम गर्छ । यदि शरीरको कुनै पनि हड्डी भाँच्चियो भने, सम्झनुहोस् शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएको छ । शरीरमा भिटामिनट डीको कमी भएका कारण हड्डीमा यस्तो समस्या आउन सक्छ । वृद्धवृद्धाहरूमा यो समस्या अझै बढी हुन सक्छ । विशेष गरी बढी उमेरका मानिसले शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा आवश्यकअनुसार रहे–नरहेको निश्चित गर्न आवश्यक छ । एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट
Don't Miss it कुन अवस्थामा आवश्यक हुन्छ दाँतमा तार ? जान्नुहोस् यस्ता छन् केही कारण
Up Next जीवनभर पेटको रोगबाट ग्रसित हुन्छन् यस्ता व्यक्ति, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
स्वास्थ्य जीवनका लागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी, मिल्छ, काम गर्न मन…
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन्। धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ यस प्रकारका…
दूधको साटो यी चिजको सेवन तपाईंका लागि हुनसक्छ खत’रनाक, पक्कै ध्यान दिनुहोस्
बढ्दो तौल आजकालको समयमा निकै आम समस्या भएको छ । अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानिसको तौल सजिलैसँग बढ्ने गर्छ । यस्तोमा…
औषधि खानु भन्दा अगाडि ध्यान दिनै पर्ने कुराहरु
कुनैपनि रोग निदानका लागि हामी औषधी सेवन गर्छौ । रोगको प्रकृति अनुसार औषधी भिन्न-भिन्नै मात्र हुँदैन, त्यसको मात्रा र सेवन…